EZONA ZINWELE ZIBALASELEYO ZABANTU BOBUSO BAKHO (ISIKHOKELO SANGO-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda Iinwele zeNtloko zamadoda eziBalaseleyo kuBume bakho boBuso
Ndifanele ndichebe ntoni? Okanye mhlawumbi indlela ebhetele yokuyibeka yile nto indilungeleyo? Le yimibuzo eqhelekileyo abafana abazibuza yona ngaphambi kokukhetha enye yeenwele ezipholileyo zamadoda anamhlanje. Kodwa eyona ndlela ilungileyo kukufumana eyona ndlela ilungileyo yokucheba iinwele ebusweni bakho. Ubume beNtloko kunye nolwakhiwo zezona zinto zibalulekileyo ekufumaneni iinwele zamadoda ngokobume bobuso.
Izinwele ezifanelekileyo ezinesitayile zinokunceda ekugxininiseni ezona mpawu zakho zibalaseleyo zobuso, kodwa ukhetho oluphosakeleyo luya kuphonsa ukukhanya kuzo zonke iimpawu zakho ezimbi. Yintoni eyenza iinwele ezilungileyo okanye ezimbi zobuso bakho kuxhomekeke ekubeni yeyiphi imilo entloko onayo nokuba ukhethe enye yezona zinwele zilungileyo ukuze zilungele ukumila kobuso bakho.
Nokuba unendawo ende, embhoxo, erhangqi, enesikwere, enxantathu, okanye yemilo yobuso bedayimane, jonga isikhokelo sethu esilula sokufumana iinwele zamadoda zamva nje!
MbiniIimilo zobuso bamadoda
2.1Imilo yobuso obu-okweqanda
2.2Ukucheba iinwele kobuso obu-Oval
2.3Imilo yobuso obuyisikwere
2.4Izitayile zeenwele zoBuso beSikwere
2.5Imilo yobuso obujikelezileyo
2.6Izitayile zeenwele zoBuso obujikelezileyo
2.7Imilo yobuso oblong
2.8Izitayile zeenwele zobuso obude
2.9Imilo yoNxantathu yoBuso
2.10Izitayile zeenwele zoBuso boNxantathu
2.11Imilo yedayimane yobuso
2.12Izitayile zeenwele zobuso beDayimani
3Izitayile zeNdawo eziBalaseleyo zaMadoda ngokweNdawo yokuBuso
Esi sikhokelo ekukhetheni iinwele ezilungileyo ngokobuso bakho buxhomekeke ekuchongeni ngokuchanekileyo imilo yentloko kunye neempawu zobuso. Ukuchonga ukuma kobuso bakho kunokuba yinkohliso ukuba awazi ukuba ujonge ntoni. Ukufumanisa ukuba uluhlobo luni lobume, uya kufuna ibha yesepha, isipili, kunye nekama.
Sebenzisa ikama, tsala iinwele zakho zisuke ebusweni bakho. Ukuba uneenwele ezinde, zibophe; Ngaphandle koko, yibambe nje ngesandla esinye ukuze ufumane umbono ocacileyo wobuso bakho.
Jonga ukubonakala kwakho esipilini kunye nembonakalo yobuso bakho. Thatha ibha yesepha, kwaye ukrole loo nkcazo kwisibuko. Qinisekisa ukuba uhambisa intloko yakho kancinci ngeli xesha.
Xa ubuyela umva, umzobo osekho esipilini uya kukukhokela xa uthelekisa iimilo zentloko ezahlukeneyo nezakho. Beka kwelinye lala macandelo alandelayo: isikwere, unxantathu, ukujikeleza, i-oval, okanye i-oblong.
Ukuba awuqinisekanga ukuba zithini iimpawu zesikwere, ezijikelezileyo, ezembhoxo okanye ezinde zobuso, jonga ke imizekelo neenkcazo ezingezantsi.
Iimilo zobuso bamadoda
Ngoku ukuba unomzobo wobuso bakho kwaye uyazi ukuba yeyiphi imilo yentloko onayo, lixesha lokuba uhlole ezona zisiki kunye nezitayile zakho. Nazi iinwele ezithandwa kakhulu ngamadoda ngobuso bobuso.
Imilo yobuso obu-okweqanda
Ubuso obumbhoxo luhlobo olude lobume obujikelezileyo. Inkcazo yemilo yobuso obume okweqanda kukungabikho kobukhali ecaleni kwesilevu sakho, izidlele kunye ebunzi . Oku kuthetha ukuba ubuso bakho bude kunee-cheekbones zakho, ibunzi lakho libanzi kunemihlathi yakho, kwaye ukumila kwentloko yakho kujikelezwe ngokubanzi ngaphandle kweekona ezibukhali.
#1 ubude beenwele
Kumadoda ajongene ne-oval, sicebisa ukuba uphephe imiphetho, izityalo kunye ne-bang, njengoko ziya kugxininisa imigca ejikelezileyo yobuso bakho. Endaweni yoko, uya kufuna ukwenza ivolumu kunye nobude ngaphezulu ukongeza imilo yakho.
Ukucheba iinwele kobuso obu-Oval
Mfutshane kumacala kwaye ubude kwizitayile eziphezulu ziya kunika ezona zilungileyo iinwele zamadoda ngobuso obu-oval, njengoko oku kusikwa kuya kwandisa kwaye kulungelelanise imilo yakho. A Ikama liphele okanye ubuyele umva engaphantsi lukhetho olufanelekileyo lokulinganisa ukujikeleza kobuso bakho.
Eminye imizekelo yeenwele zobuso obu-oval emadodeni zibandakanya i-quiff, ipompadour, i-faux hawk, ibrashi umva, nayo nayiphi na enye indlela emfutshane ukusika kubude obuphakathi engahlali icabalele. Ngapha koko, unokukhetha ukukhulisa iindevu ezinobuso obu-oval, kodwa iindiza ezishinyeneyo okanye ubuso obucocekileyo bulungile.
Imilo yobuso obuyisikwere
Ubuso besikwere ngokubanzi bubukhali kwaye bubudoda. Ubuso besikwere amadoda anemihlathi ebanzi, ebanzi, kunye neentsika ezibanzi. Ukuba unobuso obusisikwere, i-cheekbones yakho iya kusetwa phantse kude njengeyona ndawo ibanzi yomhlathi wakho. Iimpawu ngokubanzi ezilinganayo zolu hlobo ziluncedo olukhulu kwaye zenza amadoda ajongene nesikwere ajonge ubuso.
Ukwenza uninzi lobuso bakho besikwere, qinisekisa ukuba ukubola kwecala lakho kugcinwa kufutshane kwaye neenwele zakho ziphelile. A ulusu oluphezulu luphela okanye i-undercut iya kuthintela ukuqina kwamacala entloko yakho. Ukulinganisa ububanzi bobuso bakho, sika iinwele zakho ezimfutshane ukuya kubude obuphakathi phezulu kunye nesitayile sokwenza ivolumu. Oku kuya kubandisa ubuso bakho nje kwisitayela esifanelekileyo.
Izitayile zeenwele zoBuso beSikwere
Ezona zinwele zipholileyo kumadoda anobuso besikwere zezo zinemigca ecocekileyo kunye nolwakhiwo. Ukubukeka okuthambileyo, ipompadour ebunjiweyo lukhetho olufanelekileyo njengoko iinwele zendalo ngaphezulu ziya kunceda ukukhulula imigca enzima yobuso bakho. Inketho yokucoceka, yeediliya yinxalenye esecaleni yeklasikhi, ebonisa umhlathi wakho owomeleleyo.
amadoda achetywe iinwele zecala
Nangona kunjalo, ubuso besikwere buguquke kakhulu. Ezi zinwele zinokuhla ukusuka kufutshane kakhulu, ezinje nge ukusikwa kwe-buzz okanye abasebenzi abasikiweyo, kwizimbo zeenwele ezinde ezinje ngesikhwebu, ukubuyela umva, kunye nekama ngaphezulu. Qiniseka nje ukuba ukhumbula ukudibanisa oku kusikwa kunye nezitayile ngefade okanye undercut ecaleni .
Okokugqibela, ukuba uyayikhulisa iindevu, kungcono ukuba ixesha elide; nangona iindiza ezinzima zinokuba luyilo oluhle nazo. Gwema intshebe emfutshane epheleleyo.
Imilo yobuso obujikelezileyo
Ubuso obujikelezileyo bunezinto ezininzi zobuso obufanayo nobuso besikwere, kodwa ngaphandle kwemilinganiselo yeengile kunye nemiphetho. Ubume bobuso obujikelezileyo bu malunga nobubanzi obulinganayo kunye nobude, ngaphandle kweentsika ezibukhali okanye umhlathi ochazayo. Amadoda ajikeleze ubuso aya kufuna ukufumana iinwele eziphakamisa iintloko zawo kwaye avumele ukubonakala kwendoda engaphezulu.
Ukuqala, uya kufuna umva omfutshane kunye namacala ukunqanda ukwandisa intloko yakho. Ngaphezulu, uya kufuna ukunqunyulwa kweenwele okwandisa ubuso. Ukuphakama okanye ivolumu inkulu, kodwa abafana banokuhamba ngezimbo ze-asymmetrical, ezinje ngecala elitshisiweyo okanye ikama ngaphezulu , Ukwenza ukubonakala kwedolophu okuphazamisa ukulingana kobuso bakho.
iinwele ezinde kumakhwenkwe
Izitayile zeenwele zoBuso obujikelezileyo
Ukwenza ukuphakama ngaphezulu kwentloko yakho kuya kunceda ekuchazeni i-jawline yakho kwaye ugxininise i-cheekbones yakho. Ukudibanisa ubuso bakho, iinwele ezi-spiky okanye a ifeksi kunokuba kukhetho lwanamhlanje.
Ukongeza, iinwele ezahlulwe kwicala ezifana nekama ngaphezulu ziyacenga, kunye neenwele ezinemiphetho ezinje nge Isityalo saseFrance . Ukujonga okunamandla nangakumbi, yongeza ukuphakama ngepompadour, quiff okanye slicked back undercut. Okokugqibela, iindevu zinokuzikhethela, kodwa ukuba uthanda iinwele zobuso, jolisa ekufumaneni i-jawline ekhethiweyo.
Imilo yobuso oblong
Ubuso oblong, ngamanye amaxesha obubizwa ngokuba bubuxande, luhlobo nje olude lwesikwere. Njengenye yeemilo zobuso ezilinganayo, le milo yobuso inde ilungelelene. Zonke iinkangeleko zobuso (i-cheekbones, i-jawline, chin, nebunzi) ziyalingana, kodwa ubukhulu bobuso bakho bude kwaye bumxinwa kunokuba bufutshane kwaye bubanzi. Amadoda asebusweni obude anokufikelela kuninzi lweenwele ezilungileyo zamadoda.
Ngokucacileyo, uya kufuna ukunqanda iinwele ezongeza naluphi na ubude ebusweni bakho, kwaye uhlale kude neendevu ezinde. Ngaphandle kwayo nayiphi na into eyongeza ubude kakhulu ngaphezulu, amadoda anobuso obude anokususa nakuphi na ukusika kunye nesitayile.
Izitayile zeenwele zobuso obude
Ukulungiswa okulula, okuphantsi iinwele zakudala , Abafana banokucheka abasebenzi okanye basike i-buzz. Ukuba awufuni jonga lifutshane kakhulu, ungaqwalasela ukuphela okanye ukusika emacaleni ngekama ngaphezulu, icala elisecaleni, ubuyisele umva, okanye ubhale umyalezo Isityalo saseFrance . Umphetho oxhonywe phezu kwebunzi lakho unokusebenza ukunciphisa ubuso bakho.
Ngokuqhelekileyo ngekhe sincomele ubude beenwele eziphakathi kumadoda obuso oblong, ngakumbi enye eya kubonelela ngobude kunye nevolumu ephezulu. Nangona kunjalo, sikhuthaza abafana ukuba bazame njengoko wonke umntu eyahlukileyo.
Uninzi lwala macebiso alandelayo luya ebusweni bakho. Iindevu ezishinyeneyo kunye neendevu ezimfutshane zilungile, ngelixa iindevu ezinde zinokudala ukubonwa okungaphezulu kokungalinganiyo.
Imilo yoNxantathu yoBuso
Ubuso obunxantathu bulinganiselwe ezantsi kobuso. Ukuba unobuso obunxantathu obunobuso, i-jawline yakho iya kuba banzi kunee-cheekbones kunye nendawo yetempile, ethe tyaba. Kwaye njengobume bejiyometri, unxantathu wobuso bamadoda aya kuba neempawu ezibukhali kunye ezibukhali.
ingcuka tattoo amadoda
Ubude obuphakathi kunye neenwele ezinde lukhetho olufanelekileyo kumadoda anobuso obunxantathu, kuba aya kulungelelanisa kwaye afihle umhlathi obanzi nocacisiweyo. Ngokufanayo, umphetho unokunceda ukudala ukubonakala kwebunzi elijiyileyo, ngokuhlwa ngaphandle kwesilevu esomeleleyo.
Izitayile zeenwele zoBuso boNxantathu
Ezona zinwele zilungileyo kunxantathu ejongene namadoda zibandakanya amacala amafutshane kunye nobude ngaphezulu. Ukukhohlisa kwendawo ebanzi yetempile, sicebisa ukufiphala okuphantsi okanye iinwele ezinamacwecwe. Iinwele ezongezelelweyo emacaleni ziya kunciphisa ubungakanani bejikeleze iindlebe zakho.
Nangona kunjalo, ukukhetha isitayile esiguqukayo apho umthamo ungongezwa phezulu kwintloko lukhetho lobulumko njengoko oku kuya kukuvumela ukuba ulungelelanise amandla omhlathi wakho kunye nesilevu. Imizekelo yokucheba iinwele kobuso obunxantathu obunemibala ibandakanya icandelo elisecaleni, ikama ngaphezulu, ipompadour emfutshane, iquiff, kunye nemiphetho ye-angular.
Ukuba uneenwele ezithe tye, ukongeza uburhabaxa obungcolileyo kunokuba yenye indlela elungileyo yokulinganisa ubuso bakho. Ngokunikwa umhlathi owomeleleyo oqaqambileyo, abafana baya kujongeka ngathi bachetyiwe.
Imilo yedayimane yobuso
Ubuso bedayimane bude kwaye bu-angular, bunesinki esine-pointy kwaye bubanzi, i-cheekbones ephezulu. Ubume bobuso bedayimane buxhasa ukufutshane kweenwele ezinde kunye ne-jawline yakho ebunjiweyo iya kujongeka ithambile kunye neenwele zobuso. Amadoda ajongene nedayimane ayakhuthazwa ukuba akhule ngaphandle kweenwele kunye neendevu, kwaye onwabele iintlobo ezahlukeneyo zeenwele ezihambelana nobuso babo kunye nesakhiwo esihle sethambo.
Enye yeendlela ezilungileyo zokusebenzisa obu buso kukunyusa iinwele ezishinyeneyo kunye nokwenza umaleko.
Izitayile zeenwele zobuso beDayimani
I-Barbers kunye ne-stylists bacebisa iinwele ezipheleleyo kunye nevolumu ephezulu yamadoda anobuso bedayimane. Umphetho omdaka unokusebenza kakuhle ukuze utshatise i-cheekbones yakho kunye nokuthambisa umhlathi wakho. Kwangokunjalo, iinwele ezenziwe ngombala ezinje ngefeksi, ukuxubha, ukubuyela umva ixesha elide, kunye nekama ngaphezulu kokuphela zihle kakhulu.
Nangona kunjalo, lumkiswa ukuba ngekhe ulunqumle ulusu lwakho okanye unciphise ulusu - i-taper fade okanye i-scissor cut is Better than a bald fade to prevent slimming your face further. Ngaphezu koko, unokufuna ukukhula intshebe epheleleyo ukuze wandise umhlathi nesilevu.
Izitayile zeNdawo eziBalaseleyo zaMadoda ngokweNdawo yokuBuso
Ukufumana isikhokelo esikhawulezayo nesilula kwezona ndlela zilungileyo zokuhombisa iinwele zamadoda ngokokuma kobuso, landela ezi zikhokelo:
Isikwere : iinwele ezimfutshane ezinje nge-buzz kunye ne-crew cut okanye ende ngezitayile ezenziwe ngombala ezinje ngobungangamsha, icala elisecaleni, kunye nokubuyela umva.
Unxantathu : ivolumu engakumbi ibhetele; zama i-quiff, ipompadour, ibrashi, i-faux hawk okanye iinwele ezi-spiky.
Ujikeleze : fumana amacala amafutshane kunye neenwele ezinde ngaphezulu, ezinje ngomphetho onesityalo esimilisiweyo, ikama ngaphezulu kokuphela, okanye ukubuyela umva ngaphantsi.
Irhoxe : zama icala elisecaleni, ukusika i-buzz, i-Ivy League, okanye ibrashi emfutshane ukuze ugxininise amanqaku akho akudala.
Okweqanda : Linganisa ubuso bakho ngefade okanye i-undercut emacaleni ngomqolo otyhidiweyo, i-quiff, ipompadour, okanye ikama ngaphezulu.
Idayimani : zama umphetho omdaka, i-faux hawk, ukutshayela ecaleni, i-shag okanye isityalo esenziwe ngombala ukuthambisa ubuso bakho obumbala.
Ngoku ukuba uqonda kancinci malunga nokuma kobume bentloko yakho, unokufumana ezona ndlela zilungileyo zokulungisa ubuso bakho. Umchebi wakho, njengesiqhelo, unokubonelela ngolwazi olongezelelekileyo apho iinwele ziya kukusebenzela, kodwa thabatha iingcebiso kunye nawe ngokusika kunye nesitayile oza kusithanda!
Iinwele ze-80s zabafana
umgca ukucheba iinwele